Diiwaanka Wararka - NOOCA MAGAALADA → Dhismaha Magaalada Yar Yar ☆ Metalco ☆ Bellitalia
Meesha lagu ciyaaro ee Metalco
Meel casri ah oo lagu cayaaro waxay u oggolaaneysaa madadaalo aan xaddidneyn oo ammaan leh hawada furan maahan oo keliya carruurta da 'kasta leh, laakiin sidoo kale dhalinyarada. Ku ciyaarista lulidyada iyo dhamaan aaladaha la dhigo goobta ciyaarta, gaar ahaan marka lagu dhex wado saaxiibada, waa wax weyn ...
Waqtiga xaadirka ah, qalabka guryaha ayaa sidoo kale ku jira daboolida geedka. Waxyaabahan shaqeynaya iyo qurxinta ayaa lagu sameyn karaa agab kala duwan. Dhirta ku jirta booska magaalada waa dammaanad ka qaadata caafimaadka deggeneyaasha, nasashada iyo dareenka xiisaha leh ee dadka ku nool agagaaraha cagaaran. ...
Nidaamyada qaladka ah ee lagu nadiifiyo qolalka iyadoo la adeegsanayo habka ceeryaanta qallalan
Nidaamyada qaladka ee loo adeegsado geedi socodka wasakhda qashinka qalalan waxaa loo isticmaali karaa meelo kala duwan. Xilligan la joogo, markaan ka fekereyno hab wax ku ool ah oo lagu nadiifiyo qolalka, xalalka noocan ah waxaa badanaa tixgalinaya kuwa mas'uulka ka ah caafimaadka ...
Cusub oo la soo bandhigo! Rugta wasakhaynta - nadaafadda gacmaha ka METALCO
Saldhigyada jeermiska lagu dilo / saldhigyada nadaafadda gacmaha ayaa ugub ku ah dalabkeenna oo ah qayb ka mid ah naqshadaha yaryar. Waa xal fududeynaya jeermis-ka-nadiifinta gacmaha iyo qashinka. Soo dejiso buugaagta iyo liiska qiimaha >> Gacmo dhaqashada iyo jeermiska jeermiska waa nashaadaad muhiim ah oo kuu oggolaanaya ...
Qormooyin la taaban karo
Qaab dhismeedka yaryar waxaa abuuray shay yar oo qaab dhismeedka loogu talagalay oo lagu dhex daray booska magaalada ama lagu meeleeyay hanti gaar loo leeyahay, iyadoo siineysa dabeecad gaar ah boos la siiyay. Tiirarka jajaban, kuraasta casriga ah, xarkaha, alwaaxyada, dheriyada ubaxa, weelka qashinka, baaskiilka taagan, ...
31 Maarso 2020
Rugta naqshadeeyeyaasha Jamhuuriyadda Poland
Waa run in mihnadlaha dhismuhu yahay mihnad madaxbanaan oo keeni karta qanacsanaan badan iyo faa'iidooyin maadi ah, laakiin habka lagu bilaabi karo shaqo ahaan dhisme ahaan ma ahan mid fudud ama gaaban. Marka lagu daro marxaladda muuqata ee daraasadda iyo daraasadda degdegga ah, naqshada dhismuhu waa inuu sidoo kale ...
Qashinka haanta qashinka
Qashin-kala-sooca qashin-qubka iyada oo qayb ka ah dib-u-warshadaynta degmadu waxay gacan ka geysaneysaa in goobaha dadweynaha ay nadiif ka yihiin, ka takhalusaan dhibaatooyinka cayayaanka ayna bixiyaan waxtarka deegaanka ee la taaban karo iyagoo ka leexiya qashinka meelaha-qashin-qubka. Magaalooyinka waxay kaloo yareyn karaan qiimaha tuubada iyo ...
14 Maarso 2020
Hoyga baska wanaagsan waa qeyb muhiim ka ah nidaam kasta oo taraafikada magaalooyinka ku guuleysta. Waxa ka dhigaya wax fiican waa dhismayaasha ka dhigaya dayactir hooseeya iyo wax yeello iska caabin ah. Intaa waxaa sii dheer, waxay bixisaa aragti iyo marin u helka baska, ...
Guddiga warfaafinta ayaa soo raacay aadanaha ilaa waagii hore
Waxaa la dhihi karaa dhalashada calaamadaha iyo kiniiniyada waa sida odaygu yahay jiritaanka nin ee meeraha. Noocyo kala duwan oo calaamado macluumaad ah ayaa la istcimaalay ilaa bilowgii adduunka, oo mid kasta oo ka mid ah si waxtar leh loogu adeegsaday ulajeeddooyin macluumaad. Markii la helay naxaas iyo bir, ayaa ninku bilaabay inuu isticmaalo agabkan ...
4 Maarso 2020
Baaskiilka - Noocyada iyo faa'iidooyinka
Baaskiiladaha waa in lagu keydiyaa xaaladaha saxda ah, sidaas darteed sagxad sax ah ayaa waxtar yeelan doonta. Waa badeecad aad u ballaadhan oo qof kastaa u heli doono sagxad baaskiil ku habboon nafsaddiisa, taas oo gabi ahaanba ka duwanaan karta kuwa ka muuqda tallaabo kasta oo ka mid ah goobaha dadweynaha. Eeg buugga alaabada ...
HADDII naqshaddii loo yaqaan 'Design Design Award 2020' ee loo yaqaan "Metalco"!
Waxaan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqno in Smart BHLS Transoceânica Corridor ee Guto Indio da Costa ay heshay abaalmarinta IF Design Award ee 2020 ee qaybta Naqshadaynta Naqshadaynta ee hoyga basaska is-dhexgalka ah, kaas oo qayb ka ah mashruuca SMART CITY. Eeg buuga alaabta internetka >> ama ...
Architektarka wuxuu la shaqeeyaa qorshaynta iyo qaabeynta dhisme ama qaab dhismeed. Farshaxanleydu waxay awoodaan inay falanqeeyaan fikradaha ama fikradaha macaamiishooda oo ay u abuuraan mashaariicda dhismaha ee u gaarka ah iyaga ku saleysan. Shaqooyinka naqshadeeyuhu wuu kala duwanaan karaa: qaar ayaa ku takhasusay qaabeynta dhismayaasha ...
Qorshaynta magaalada - waa maxay saxda?
Maanta, qorshaynta magaaladu waa mid ka mid ah cilmiga loo baahan yahay marka aad tixgeliso sida ay u ballaaran tahay tirada dadka adduunka ee hadda ku nool magaalooyinka iyo hareeraheeda. Sannadkii 1800, in ka badan 2 boqolkiiba dadka dunida ayaa ku noolaa magaalooyin. Markay ahayd 1950, tiradaasi waxay kacday 30 boqolkiiba. Iyo hada ...
Sharciga Dhismuhu waa ficil hagaya oo qeexaya nashaadyada la xiriira naqshadeynta, dhismaha, duminta iyo kormeerka dhismayaasha. Marxalad kasta oo lagu dhisayo dhisme, laga soo bilaabo qaabeyntiisa ilaa la dhammaystiro, waxay u baahan tahay u hoggaansanaanta sharciga dhismaha. Sharciga dhismaha iyo qaab dhismeedka yaryar Sharci ...
Dheriga Beerta iyo maaddadooda - midkee ayaa ugufiican?
Abaabulka beerta waa in lagu sameeyaa taxadar weyn. Si kastaba ha noqotee, xitaa marka adeegsaduhu uusan lahayn jardiino ballaaran oo loogu talagalay, laakiin kaliya jardiino yar yar, ama xitaa balakoon ama dhul beereed, waxay sidoo kale abuuri kartaa qeyb yar oo boos cagaaran. Saldhigeedu wuxuu markaa noqon doonaa dheriyo jardiinooyin ah, oo ...
Xayndaabku wuxuu u fiicnaan doonaa oo u xoogan yahay sida tiirarka xayndaabka ee taageera. Iyadoo aan loo eegin nooca ay noqon doonaan waxyaabaha ay ka sameysmi doonaan, waxaa habboon in la ogaado faa'iidooyinka, faa'iido darrooyinka iyo isticmaalka tiirarka oodda ee ka samaysan qoryaha, birta, tiirarka xayndaabka shubka ah iyo kuwa la dhejiyay ...
Qashin-qubka jidadka casriga ah oo qayb ka ah qaab dhismeedka magaalada
Qashin-qubka, oo laga helo waddooyinka, meelaha istaaga, jardiinooyinka magaalada, garoomada ciyaarta, sanduuqyada ciidda, jardiinooyinka iyo fagaarayaasha magaalada, mararka qaarkood waxaa loo yaqaan qashinka waddooyinka, qashinka waddooyinka, qashinka magaalada ama qashinka dawladda hoose. Eeg buugga wax soo saarka internetka ...
Beerta nasashada, magaalada iyo kuraasta beerta
Kuraasta Baarkinka waa shey lama huraan u ah alaabta guriga. Marka laga eego aragtida shaqooyinka korantada, waxaa loo isticmaalaa fadhiga, laakiin iyada oo la tixgelinayo qorsheynta goobaha, waa alaab guri. Jardiinooyinka, fagaarayaasha, jardiinooyinka, jidadka iyo joogsiga magaalada waxaa la dhigay kuraas. Eeg buugga ...
28 Janaayo 2020
Qaab dhismeedka magaalooyinka yar yar
Alaabada dariiqa waa koox ka kooban dhismayaal yaryar oo si weyn u saameeya aragtida ay adeegsadayaashu ka helaan booska. Adeegsiga walxaha si taxaddar leh loo xushay ee qaab dhismeedka yar ee aagga horumaray uu ku qaadanayo dabeecadda, muujinta iyo, wax walba, ...
Alaabada la soo xulay
Ku qor e-mayl
© MACLUUMAADKA MAGAALADA 2020 |Siyaasadda Asturnaanta
Xogtaada shakhsi ahaaneed waxaa loo isticmaali doonaa in lagu fuliyo amarkaaga, loo maareeyo booqashadaada boggayaga iyo ujeedooyin kale sida ku xusan kuweenna Siyaasadda Asturnaanta .
Waan aqriyay oo waan aqbalay qawaaniinta shabakada
U dir baaritaankaaga